sounds - Synonyms of sounds | Antonyms of sounds | Definition of sounds | Example of sounds | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for sounds
Top 30 analogous words or synonyms for sounds
Punk jazz ၁၉၇၀အလယ်တွင် ဩစတေးလျ punk ဖြစ်ရပ်မှ တီထွင်သူများသည် jazz လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ the Saints ၏ ၁၉၇၈ album "Prehistoric Sounds" တွင် swing ပုံစံများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ Ed Kuepper တို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ Laughing Clowns တီးဝိုင်းသည် jazz ပုံစံဖန်တီးခဲ့သည်။ Sun Ra, Pharoah Sanders နှင့် John Coltrane အနုပညာရသဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ Ollie Olsen ၏အစောပိုင်းလုပ်ဆောင်
ဝစ္စလဝါ ရှင်ဘော့စကာ Monologue ofaDog(Harcount, 2005), Miracle Fair : Selected Poems of Wislawa Szymborska (Norton, 2001); Poems, New and Collected, 1957-1997 (Harcourt, 1998); View withaGrain of Sand: Selected Poems(Harcourt, 1995); People onaBridge (Forest, 1990); and Sounds, Feelings Thoughts: Seventy Poems (Princeton UP, 1981) အစရှိသည့် လက်ရာများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်သော ရှင်ဘော့စကာ၏ ကဗျာလက်ရာများဖြစ်သည်။ သူမ၏ စာပေလက်ရာများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြသည့်အပြင် အာရဗီ၊ ဟေဘရှု၊ ဂျပန်နှင့်တရုတ် ဘာသာစကားများသို့လည်း ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။
Nintendocore Nitendocore သည် electric guitar, drum kit နှင့် synthesizer, Chiptunes, 8-bit sounds တို့ကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းသည် အမျိုးမျိုးသော ဂီတပုံစံများမှ စတင်ခဲ့သည်။ hardcore punk, post-hardcore, melodic metalcore နှင့် heavy metal တို့ပါဝင်သည်။ electro, noise rock, post-rock နှင့် screamo တို့လည်း လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Horse the Band သည် metalcore, heavy metal, thrash metal နှင့် post-hardcore တို့ကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ Horse the Band၏ တတိယမြောက် albm “The Mechanicla Hand မှ the Black Hole သည် Nitendocore ၏ နမူနာပုံစံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စူးရှသောအဆိုပုံစံများ ကြီးမားလေးလံသော Nitendo riff များနှင့် များပြားစွာသော game များမှ sound effect များဖြင့် ထူးခြားသည်။ Ma the Band သည် Electro နှင့် dance punk ပုံစံများပါဝင်သည်။ Minibosses တီးဝိုင်းသည် Kyuss ကို အဆိုပြုထားပြီး heavy metal riff များပါဝင်သည်။ The Advantage သည် noise rock နှင့် post-rock ပုံစံများ ပါဝင်သည်။ The Deprecuation Guild သည် indie တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး 8-bit sounds, video game ဂီတနှင့် Shoegazing မှ အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ Nintedocore အုပ်စုများသည် Nitendo game များမှာ အသံများကို တုပရန်သီးခြားတူရိယာ များကို အသုံးပြုကြသည်။
ရခိုင်ဘာသာစကား Arakanese prominently uses the sound, which has merged to the sound in standard Burmese. Also, Arakanese has merged various vowel sounds like () vowel to ဣ (). Hence,aword like "blood" is () in standard Burmese while it pronounced in Arakanese. According to speakers of standard Burmese, Arakanese only has an intelligibility of seventy-five percent with Burmese. Moreover, there is less voicing in Arakanese than in Standard Burmese, occurring only when the consonant is unaspirated. Unlike in Burmese, voicing never shifts from to .
Alternative rock ၁၉၉၀ ဝန်းကျင် alternative rock မပေါ်မီ ဂီတကို အမျိုးအစားလိုက်ခွဲခြားသည်။ ၁၉၇၉ တွင် Terry Tolkin သည် alternative ဂီတကို ဖော်ပြရာ၌ ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ တွင် Dallas radio ဌာန KZEW သည် new wave ညတွင် Rock and Roll Alternative ဟူသော show ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ college rock ဟူသော ဝေါဟာရကို အမေရိကန်တွင် ၁၉၈၀ အတောအတွင်း college radio နှင့် college ကျောင်းသားများဆီသို့ ဖြန်ချီရာ၌ အသုံးပြုခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်တွင် do it yourself record label ပေါ်ထွက်လာပြီး punk ယဉ်ကျေးမှုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Cherry Red, NMEနှင့် sounds မဂ္ဂဇင်းက Alternative သီချင်းစာရင်းကို ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသီချင်းစာရင်းတွင် ၁၉၈၀ ဇန်နဝါရီတွင် Indie Chart ကို ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ထို labelများသို့ ကူညီရန် ရည်ရွယ်၍ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် Indie ဟူသော ဝေါဟာရကို ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ၁၉၈၅တွင် indie သည် ထူးခြားသည့် အမျိုးအစားဖြစ်လာခဲ့သည်။
Baroque pop Zombies တီးဝိုင်းသည် New York မှဂီတသမား Michale Brownကို the left Banke တီးဝိုင်းဖွဲ့စည်းရန် လှုံဆော်စေခဲ့သည်။ သူ၏ ၁၉၆၆ single တွင် Walk Away Rence သည် စန္ဒရားတစ်မျိုးနှင့် String quarter ကို အသုံးပြုထားသည်။ အမှတ်ရစရာ baroque pop single ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန် the Yardbirds မှ Jeff Beck သည် ထုံးစံအတိုင်းမဟုတ်သော ဂီတအရသာကို သူတို့၏ Gregorian chant နှင့် ကမ္ဘာဂီတလွှမ်းမိုးမှု တစ်လျှောက်တွင် မျိုးခွဲထဲမှ ပြောင်းလဲသော အလုပ်သည် baroque တီထွင် ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ပြီးမြောက်စေလုပ်မည်။ Beach Boy ၏ Pel Sounds (၁၉၆၆)နှင့် God Only Knows နှင့် Caroline, No တို့ပြဇတ်စာသားများနှင့် စီစဉ်ထားသည်။ single Wouldn’t it Be Nice သည် သူတို့၏အရင်အလုပ်ထက် တိုးမြှင့်တီးခတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Pet Sound ကို တုန့်ပြန်သောအားဖြင့် baroque တီးခတ်ခြင်းသီချင်းများမှာ For No One နှင့် Eleano Rigby တို့ဖြစ်သည်။